हो, हामी संसार भर मा जहाज। शिपिंग लागतहरू लागू हुनेछ, र चेकआउटमा थपिने छ। हामी सबै बर्ष छुट र पदोन्नति चलाउँछौं, त्यसैले विशेष सौदोंको लागि सम्पर्कमा रहनुहोस्।
मेरो अर्डर प्राप्त गर्न कति समय लाग्नेछ?
वितरण समय तपाईंको स्थानमा निर्भर गर्दछ। सबै अर्डरहरू हाम्रो एक बन्दबाट पठाइनेछiceएस युरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका वा एसियामा। जब तपाईं अर्डर गर्नुहुन्छ, तपाईंको अर्डर नजिकको स्थानबाट पठाइनेछ। तपाईं "मानक" वा "एक्सप्रेस" शिपिंग विधि छनौट गर्न सक्नुहुन्छ र अनुमानित वितरण समयहरू चेकआउटमा देखाइने छ।
वितरण समय तपाइँको देश वा क्षेत्र मा वर्तमान ढिलाइहरु मा पनि निर्भर गर्दछ। तपाईंको पुष्टिकरण ईमेलमा डेलिभरी विवरणहरू प्रदान गरिएको छ।
क्लिक गर्नुहोस् यहाँ अनुमानित वितरण समयहरू हेर्न।
तपाईं कुन शिपिंग क्यारियरहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ?
हामी सबै प्रमुख क्यारियरहरू, र स्थानीय कुरियर पार्टनर प्रयोग गर्दछौं। तपाईंलाई चेकआउटको बखत डेलिभरी विधि चयन गर्न आग्रह गरिनेछ।
के तपाईसँग प्रिस्क्रिप्शन सहित लेन्स छन्?
हो हामीसँग छ। तपाईको इच्छित छनौट गर्नुहोस् रंग र आफ्नो छनौट गर्नुहोस् power ड्रप-डाउन मेनुबाट।
लेन्स कति लामो हुन्छ?
तिनीहरू मासिक लेन्स हुन् जुन तपाईं times० पटक लगाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ लेन्सहरू राम्रोसँग मर्मत गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ पनि बिच बीच ब्रेक लिन सक्नुहुन्छ।
हामी स्वच्छ कारणका लागि ईयर लेन्सहरू बेच्दैनौं। किनकि यो लामो अवधिमा तपाईंको आँखाको स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन सक्छ।
लेन्सको विशिष्टता के हो?
समय लेन्स लगाउनुहोस्: 14 घण्टा
वेबसाइटमा फोटोको तुलनामा किन रंग फरक छ?
Opticcolors लेन्स आँखाको प्राकृतिक सौन्दर्य लाई बढावा दिन्छ। हाम्रो र color्ग लेन्स पूर्ण रूपमा कभर, तर एक बिट आफ्नो आँखा रंग संग जोड। किनकि लेन्सहरू प्राकृतिक रूपको लागि बनेका छन्। यसैले परिणाम तपाईंको आफ्नै आँखाको रंगमा निर्भर गर्दछ। यो तस्विरको प्रकाश घटनामा पनि निर्भर गर्दछ, र तपाईंको स्क्रीन रिजोलुसन।
कसरी र color्ग लेन्सहरू प्रयोग र संरक्षण गर्ने?
क्लिक गर्नुहोस् यहाँ निर्देशनहरू हेर्नको लागि।
म कस्तो प्रकारको लेन्स समाधान प्रयोग गर्नुपर्दछ?
हामी सफ्ट लेन्सको लागि सबै इन -१ लेन्स समाधान प्रयोग गर्ने सल्लाह दिन्छौं।
(निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले पानी प्रयोग गर्नुहुन्न। यसले लेन्सलाई क्षति पुर्‍याउछ र यसले आँखा संक्रमण हुन सक्छ।)
जब लगाउने बेला अप्ठ्यारो महसुस वा धमिलो दृष्टि भयो भने मैले के गर्नुपर्छ?
लेन्स सफा भएको निश्चित गर्नुहोस्। लेन्समा सहज नभएको एउटा कारण यो हो कि त्यहाँ लेन्समा प्रोटीन कणहरू छन्। यसलाई सबै-इन -१ तरल पदार्थले सफा गर्नु उत्तम हुन्छ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले पानी प्रयोग गर्नुहुन्न। यसले लेन्सलाई क्षति पुर्‍याउँछ र संक्रमण निम्त्याउन सक्छ।
अर्को कारण यो हुन सक्छ कि तपाइँ लेन्स भित्र बाहिर राख्नुहुन्छ। लेन्सका दुई पाटा छन्।
तेस्रो कारण यो हो कि तपाईंले लेन्स स्क्र्याच गर्नुभयो। यसले तपाइँलाई एक अस्पष्ट दृश्य पनि दिन्छ र लेन्स पनि कम सहज छ।
अन्तिम कारण यो हो कि तपाई एसिग्मेटिज्मबाट ग्रस्त हुनुहुन्छ। यसको मतलब तपाईंको आँखा फरक छ। यसको लागि तपाईलाई अप्टिशियनमा जानु पर्छ यो जाँच गर्न। त्यसोभए तपाईं विशेष डिजाइन गरिएको लेन्सहरू किन्न सक्नुहुनेछ।
क्लिक गर्नुहोस् यहाँ निर्देशनहरू हेर्नको लागि
सम्पर्क लेन्स लगाउने बारेमा सुरक्षा जानकारी।
- सधैं आफ्नो हात धुनुहोस् तपाईंको कन्ट्याक्ट लेन्सहरू लगाउनुभन्दा पहिले, हटाउनुभन्दा पहिले।
- contactण दिनुहोस्, उधारो वा प्रयोग गरिएको सम्पर्क लेन्स साझा नगर्नुहोस्, अन्यथा, यसले तपाईंको आँखामा संक्रमण हुन सक्छ।
- कृपया सुत्नु भन्दा पहिले तपाईंको लेन्सहरू बन्द गर्नुहोस्।
- आँखा वरिपरि मेक-अप राख्नु अघि लेन्सहरू घुसाउनुहोस्, र मेक-अप लिनु अघि लेन्सहरू बन्द गर्नुहोस्।
- कृपया जब कुनै लेन्स लगाउँदा कुनै पनि पानीका खेलहरूमा भाग लिनुहुन्न।
- आफ्नो सम्पर्क लेन्स लगाउँदा कुनै आँखाको औषधि प्रयोग गर्नु अघि तपाईंको सम्पर्क लेन्स व्यवसायीसँग परामर्श लिनुहोस्।
- यदि छेडछाड स्पष्ट छाप क्षतिग्रस्त छ भने प्रयोग नगर्नुहोस्।
- लगातार आँखाको जलनको स्थितिमा, तत्काल प्रयोग बन्द गर्नुहोस्, आँखाबाट लेन्स हटाउनुहोस् र तपाईंको सम्पर्क लेन्स व्यवसायीसँग परामर्श लिनुहोस्।
- सबै सम्पर्क लेन्स केयर उत्पादनहरू बच्चाहरूबाट टाढा राख्नुहोस्।
- सम्पर्क लेन्स भण्डारणको बेला केसबाट क्याप हटाउनुहोस्।
- नोजल टिपलाई कुनै पनि सतहलाई छुने अनुमति नदिनुहोस्।
- सधैं बोतल क्याप प्रयोग पछि बदल्नुहोस्।
- सम्पर्क ट्याग वा लेन्सको केसलाई पानीको साथ सिधै नलगाउनुहोस्।
- तपाईंको लेन्स भण्डारण मामला नियमित रूपमा सफा गरिनुपर्नेछ र तपाईंको सम्पर्क लेन्स व्यवसायीले सिफारिस गरेको रूपमा बारम्बार परिवर्तन गर्नुपर्छ।
- यो सुनिश्चित गर्न कि आँखा सुरक्षा सम्झौता गरीएको छैन, तपाईंले समाधान कहिल्यै प्रयोग गर्नु हुँदैन। यदि लेन्सेस समाधानमा days दिन भन्दा बढीको लागि भण्डारण गरिएको छ भने, यो सिफारिस गरिन्छ कि तपाइँ डिस्फेक्सन प्रक्रिया दोहोर्याउनुहोस्।
- समाप्ति मिति उत्पादनमा संकेत गरे पछि प्रयोग नगर्नुहोस्।
म कसरी अर्डर गर्न सक्छु?
क्लिक गर्नुहोस् यहाँ आदेश प्रक्रिया हेर्न।
हामी कुन भुक्तानी विधिहरू प्रस्ताव गर्छौं?
तपाईं हामीसँग आईडीआइएल, पेपैल, मास्टरकार्ड, भिसा, बैंककन्ट्याक / मिस्टर नगद, सॉफ्टवेयर बैंकिंग, पेसाफेकार्ड, भिसा इलेक्ट्रोन, मास्ट्रो, बेलफियस, अमेरिकन एक्सप्रेस, केबीसी, गिरोपे, ईपीएस र कार्टेस बान्केयरहरूसँग भुक्तानी गर्न सक्नुहुनेछ। अतिरिक्त सेवाको रूपमाice हामी बैंक स्थानान्तरण मार्फत अग्रिम भुक्तानी गर्न पनि प्रदान गर्दछौं। दिमागमा राख्नुहोस् कि केहि भुक्तान विधिहरू जस्तै "बैंक स्थानान्तरण" लेनदेन पूरा गर्न केहि व्यापार दिन लिन सक्दछ। हामीले तपाईंको भुक्तानी प्राप्त हुने बित्तिकै हामी तपाईंलाई अर्डर पठाउनेछौं।
के मेरो भुक्तानी सफल भयो?
जब तपाईंको भुक्तानी सफल हुन्छ तपाईं स्वचालित रूपमा यस बारेमा एक ईमेल प्राप्त गर्नुहुनेछ। (त्यहाँ यस्तो पनि सम्भावना छ कि तपाईं आफ्नो स्पाम बक्समा ईमेल प्राप्त गर्नुहुनेछ)
कृपया नोट गर्नुहोस् कि केहि भुक्तान विधिहरू जस्तै "बैंक स्थानान्तरण" लेनदेन पूरा गर्न केहि व्यापार दिन लिन सक्दछ।
के मेरो अर्डर फिर्ता गर्न सम्भव छ?
हामी जहिले पनि हाम्रा ग्राहकहरु हाम्रा उत्पादनहरु लाई माया गर्छौं भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न हामी लक्ष्य राख्छौं, तर यदि तपाईलाई अर्डर फिर्ता चाहिन्छ भने हामी सहयोग गर्न खुसी छौं।
स्वास्थ्यकर कारणहरूले गर्दा तपाईं केवल आफ्नो अर्डर फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ यदि तिनीहरू खुलेका र राम्रो अवस्थामा छन्। (रसिदको १ working कार्य दिन भित्र)
क्लिक गर्नुहोस् यहाँ फिर्ताको पूर्ण प्रक्रिया अवलोकन गर्न।
Opticcolors र color्ग लेन्स र सामानका लागि तपाइँको पार्टनर हो।
हामी एक डच कम्पनी हो जुनसँग विश्वव्यापी हजारौं सन्तुष्ट ग्राहकहरू छन्। यो किनभने Opticcolors गुणस्तर, विश्वसनीयता र राम्रो सर्भरको लागि खडा छice.
हामी कसरी लामो समयदेखि सोच्दै थियौं कि हामी तपाईंलाई कम PR को लागि उच्च गुणवत्ताको र color्ग लेन्सहरू कसरी प्रदान गर्न सक्दछौंice। सही किफायती कम्पोनेन्ट पाउनका लागि हामीले धेरै प्रयोग गर्‍यौं जुन सही पानी सामग्रीसँग पनि राम्रो फिट हुनु आवश्यक छ। यसले तपाईंको आँखा हाइड्रेट र स्वस्थ रहन सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। यो सबै प्रदान गर्नका लागि, हामीले उत्तम नरम लचिलो फेमफिलकोन ए घटक छनौट गरेका छौं। यस घटकले एक लचिलो फिट, उच्च पानी सामग्री र एक सस्तो कम जनसंख्या सुनिश्चित गर्दछice तपाईं बाट लाभान्वित गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसो भए हामीले धेरै प्राकृतिक प्रिन्टहरू डिजाइन गरेका छौ जुन प्रत्येक आँखाको लागि उपयुक्त छन्। प्रिन्टहरूले आँखाको प्राकृतिक सौन्दर्यलाई जोड दिन्छ, देख्नलाई अझ गहन बनाउँछ। हामीले यसलाई लेन्समा लागू गर्‍यौं जुन अन्ततः भयो Opticcolors र color्ग लेन्स Opticcolors र color्ग लेन्स पार्टीहरू, विशेष दिन वा दैनिक प्रयोगको लागि पूरकको रूपमा उत्तम हुन्छ।
At Opticcolors हामी विश्वस्त छौं कि साँचो सुन्दरता भित्र छ। सबैजना आफ्नै अनौंठो तरिकाले सुन्दर छन्। त्यसकारण हामी खुशीसँग तपाईलाई पहिलेभन्दा अझ सुन्दर महसुस गर्न मद्दत गर्दछौं। के तपाइँसँग प्रश्नहरू छन् वा तपाईंलाई सल्लाह चाहिन्छ?ice? संकोच र हामीलाई सम्पर्क नगर्नुहोस्!
तपाईं हामीलाई ईमेल मार्फत सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ! हामी तपाईंलाई सहयोग गर्न खुसी हुनेछौं।
म कसरी मेरो अर्डर ट्र्याक गर्न सक्छु?